Diyo post :: प्रकाण्ड पक्राउ प्रकरण : होटल अन्नपूर्णकी सञ्चालिका श्रजना राणाले जासुसी गरेको खुलाशा ! प्रकाण्ड पक्राउ प्रकरण : होटल अन्नपूर्णकी सञ्चालिका श्रजना राणाले जासुसी गरेको खुलाशा ! - Diyo post
प्रकाण्ड पक्राउ प्रकरण : होटल अन्नपूर्णकी सञ्चालिका श्रजना राणाले जासुसी गरेको खुलाशा !
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा प्रवक्ता खड्क बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड पक्राउ प्रकरणमा दरबारमार्ग स्थित होटल अन्नपूर्णकी सञ्चालक श्रीजना राणा विवादमा तानिएकी छिन् ।
प्रकाण्डलाई पक्राउ गराउन होटल सञ्चालिका राणाले सुचना दिएको समेत खुलाशा भएको छ । होटल अन्नपूर्णकी कार्यकारी निर्देशक राणाले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई दिएको करीब एक करोड चन्दा पार्टी हेडक्वाटरमा नपुगेपछि प्रकाण्ड आउँदै गरेको खबर उनैले प्रहरीलाई चुहाएको विशेष स्रोतको दाबी छ ।
अन्नपूर्ण होटलको तल रहेको जेम्स हाउस नामको पसल उठाउन पटक पटक प्रयास गरेपनि नसकेपछि उनी विप्लव नेतृत्वको नेकपाको सहारा लिन पुगेकी थिइन् ।
नेकपाको सरणमा पुगेको केही समयमै नेकपाका नेताहरुले जेम्स हाउसका सञ्चालकलाई ‘जेम्स हाउस नहटाए, बमले उडाइदिने धम्की’ दिएपछि तुरुन्तै हटेको थियो ।
जेम्स हाउस हटाएबापत नेकपालाई चन्दा बापत श्रजना राणाले एक करोड भन्दा धेरै रकम दिएको समेत स्रोतको दाबी छ । तर, उक्त रकम विप्लवको हेडक्वाटरमा नपुगेको पाइएपछि पार्टी भित्रै उक्त रकम कहाँ गयो भन्दै तनावपूर्ण स्थिति हुन पुगेको थियो ।
पैसा कहाँ पुग्यो भन्दै राणाले प्रहरीका केही अधिकारीलाई समेत गुनासो गरेपछि सोही शिलशिलाका क्रममा राणाले प्रकाण्ड मंगलबार हेटौंडाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको सुचना प्रहरीलाई दिएकी थिइन् । राणाको सुचना फलो गर्दै प्रहरी दक्षिणकाली तर्फ हानिएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी सहितको समुहले मंगलबार साँझ प्रकाण्डलाई दक्षिणकाली नगरपालिका टौडबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले ७ करोड भन्दा बढी चन्दा असुलेको भन्दै ५ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रकाण्ड पक्राउपछि आक्रोशित बनेका पार्टी महासचिव विप्लवले भने साउन २९ गते नेपाल बन्दसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।